Wararka - Hal -abuurnimo cusub oo ku saabsan adeegyada naqshadaynta nigiska ee Haweenka Customka ah
Hal -abuurnimo cusub oo ku saabsan adeegyada naqshadaynta nigiska ee Haweenka Customka ah
Noloshu aad bay ugu gaaban tahay rajabeeto aan raaxo lahayn, oo aan fiicnayn!
Aasaasihii: Waxay had iyo jeer jeclayd kabaha, waxayna rajaynaysaa in dumarka oo dhami ay xidhan karaan kabaha dhaadheer ee ku habboon cagahooda oo siin kara xoog badan. Waxaa la aasaasay astaanta naqshadeynta kabaha madaxbannaan 1998, waxay xoogga saartay cilmi -baarista sida loo sameeyo kabaha haweenka ee casriga ah oo raaxo iyo moodba leh. Waxay jebisay shirkii waxayna dib u qeexday. Helitaanka haweenku inay xidhaan cidhibteeda dhaadheer hadda ma aha hawl adag. Xirashada cirbaha dhaadheer ee aadan ku xidhnayn, jannada ku gal riyooyinkaaga.
Si kastaba ha ahaatee, waxay iyaduna aad u doonaysaa in haweenku ay iska jabi karaan nigisyada iyadoo leh waayo -aragnimo xirashada nigiska oo sannado ah. Waxay xitaa ka fikirtay fikradda ah "Qof walba wuxuu leeyahay nigis la naqshadeeyay" si loo ogaado haweeney kasta inay u qalanto nigis u gaar ah.
Kani waa hab lagu muujiyo dumarka ka buuxa tamar, galmo, iyo soo jiidasho leh. Waxay aamminsan tahay in galmadu aysan ahayn wax lagu farxo dadka kale, laakiin muujinta kale ee xorriyadda. Waxay bilawday inay abuurto astaanta nigiska 2004.
Waxay leedahay mas'uuliyad aan laga jawaabin, hawlgal ah inay sidato culeysyo culus, aragtida macaamiisha marka hore, iyo mas'uuliyadda buuxinta baahiyaha macmiil kasta.
Waxay tiri: waxaan mar walba jeclayn inaan naqshadeynno oo aan tolo, runtii waxaan jecel nahay loolan, waxaan awoodnaa inaan tolanno rajabeeto runtii raaxo leh oo waliba dhacday inay aad u muuqato. Qaybta ugu fiicani waxay ahayd inay gabdhuhu u muuqdaan kuwo aad u qurux badan!
dadka maalin walba ku jira naasaha maalinlaha ah. naasaha raaxada leh, Silhouettes way hurdaysan yihiin, qaloocyadu way dhaadheer yihiin, dulqaadkuna wuu ka baxay shaxanka! waxaan ganacsi ku jirnay in ka badan 10 sano qeybta aan ugu jecelnahay oo dhan wali waa kalsoonida aan awoodno inaan siino macaamiisheena. Dadka ka fog Mareykanka iyo kuwa ku dhow albaabka xiga ayaa u yimid naftooda, raaxo leh, galmo leh, la-cabbiray, fiilooyin-aan weligood jeexin, rajabeeto caadadiisu tahay.